कुन दिशामा धन राख्दा बढेर जान्छ ? कहाँ धन राख्दा नाश हुन्छ? – Nayabook
कुन दिशामा धन राख्दा बढेर जान्छ ? कहाँ धन राख्दा नाश हुन्छ?
हामी सबैसँग धेरै-थोरै धन हुन्छ नै। हामी सबै यहीँ चाहन्छौं कि हाम्रो धन दिनानुदिन बढीरहोस। जान्नुहोस् हाम्रो आफ्नो धन-सम्पदा, बहुमुल्य सामग्री र आभूषण कुन दिशामा कसरी राख्ने जसले गर्दा धन वृद्धि हुनेछ। यस्तो छ उपाय:
पूर्व दिशा :यहाँ घरको सम्पत्ति र तिजोरी राख्नु निकै शुभ हुने गर्दछ। यसबाट उपलब्ध सामग्रीमा वृद्धि हुने गर्दछ।पश्चिम दिशा :यहाँ धन-सम्पत्ति र आभूषण राखियो भने घरको मुखियालाई धन कमाउन निकै कठिनाई हुने गर्दछ।
उत्तर दिशा :पैसा अथवा आभूषण जुन दराजमा राखिन्छ त्यो दराजमा भवनको उत्तर दिशाको कोठामा दक्षिणको भित्तामा टासेर राख्नु पर्दछ। यस प्रकारले राख्नाले दराज उत्तर दिशा तर्फ खुल्नेछ। यस्तोमा राखिएको पैसा र आभूषणमा सधै वृद्धि हुने गर्दछ।
दक्षिण दिशा :यस दिशामा धन, सुन, चादीँ र आभूषण राख्नाले नोक्सान त हुदैन तर बढ़ोत्तरी पनि हुदैन।भर्याङको मुनि दराज राख्नु शुभ मानिन्न। भर्याङको अथवा शौचालयको अगाडि दराज राख्न हुदैन।
दराज भएको कोठामा फोहोर,माकुराको जालो हुनाले नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुने गर्दछ। घरको दराजमा लक्ष्मीजीको तस्वीर जसमा दुवै हात्ती सूंड उठाएका देख्न सकिन्छ। यस्तो तस्वीर लगाउनु निकै शुभ मानिने गरिन्छ। धन राख्ने दराज राख्ने कोठाको रङ क्रीम अथवा सेतो हुनु पर्छ।
यो पनि पढ्नुहोस् :धर्म शास्त्रका अनुसार कलियुगको आयू अब कति ?:धर्म शास्त्र अनुसार ब्रह्माण्डमा चार युग रेहका छन् । जसमा सत्य, त्रेता, द्वापर र कलियुग पर्छन् ।हिन्दु शास्त्रका अनुसार चार मध्येको अन्तिम कलि युग हो । यो युगमा मानिसहरुको चरित्र बिग्रने, सभ्यताको नाममा नयाँ समस्याहरु जन्मने भनेर शास्त्रहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।
द्वापर युगको अन्त्यपछि शुरु भएको युग नै कलि युग हो । कलि युगको अन्त्यसँगै सारा संसार ध्वंस भई नयाँ संसारको शृजना हुने विश्वास गरिन्छ ।कलि युग ४ लाख ३२ हजार वर्षको हुने शास्त्रहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।
कलियुगको आरम्भ:१२ सय दिव्य वर्षको एक कलियुग मानिएको छ । कलियुग चौथो युग हो । शास्त्रहरुका अनुसार महाभारत युद्ध ३१३७ ईसा पूर्वमा भएको थियो । कृष्णको यो युद्धको ३५ वर्षपछि देहान्त भएको थियो, जसपछि कलियुगको आरम्भ भएको विश्वास लिइन्छ ।
कलि युगमा भगवान विष्णुको दशौं अवतारको रुपमा कल्किको प्रभाव रहेको विष्णु पुराणमा उल्लेख गरिएको छ ।कल्कि अवतारको कथा यस प्रकार छकल्किको रुपमा विष्णु कलियुगको अन्तिममा उपस्थित हुनुहुन्छ भनेर धर्म ग्रन्थहरुमा भनिएको छ। कल्कि अवतार कलियुग र सत्ययुगको संधिकालमा हुनेछ।